प्रवृति राईको तिमीले मलाई छाडी जादा मेरो के हालत हुन्छ गीत रेकर्ड - Jerung Films
प्रवृति राईको तिमीले मलाई छाडी जादा मेरो के हालत हुन्छ गीत रेकर्ड
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 8 Dec 2018
जेरुङ फिल्मस संवाददाता,२२,मंसिर–काठमाण्डौ. । पूर्वीय नेपालको खोटाङ जिल्लामा जन्मेकी प्रवृति राईले आफ्नो पहिलो मार्मिक गीत रेकर्ड गरेकी छन् । सानै उमेरदेखि नै गीत संगीतमा रमाउने सुनौलो सपना बोकेकी राईले साईनो कला केन्द्रबाट आफ्नो सांगीतिक यत्रा सुरु गरेकी हुन् ।
प्रमोद श्रेष्ठको शब्द रहेको“तिमीले मलाई छाडेर जादाँ मेरो के हालत हुन्छ ” ? बोलको गीत राईको पहिलो गीत पनि हो । सामान्य परिवारमा जन्मेकी राईले मेहिनत र लगनशीलता देखायो भने यस कलाकारिता क्षेत्रमा पनि राम्रै हुने भविष्य रहेको बताउछिन् । उनले २०७५ को ओखलढङ्गा भिजन आईडलमा समेत विजेताको उपाधी हात पारेका थिए ।
आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रमा आउनलाई सबै परिवारको पनि राम्रो सहयोग रहेको उनी बताउछीन् । गीत गाउने सपना आफ्नो भन्दा पनि विशेष गरि आफ्नो आमाको सपना रहेको राईले बताइन् । जुन आफ्नो पहिलो गीत रेकर्डले आफ्नो आमाको आत्माले खुशी पाउने समेत बताइन् ।
पहिलो चोटी गीत रेकर्ड गर्न राजधानी छिरेकी राईले यो सुनौलो अवसर दिएकोमा साईनो कला केन्द्रलाई धन्यवाद पनि दिईन् । भक्त विश्वकर्माको संगीत रहेको गीत भर्खरै मात्र भर्जिन स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको छ । यसै विषयमा जेरुङ फिल्मसले उहासँग गरेको अन्तरङ्ग कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।